May 22, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somalia, Somaliland, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 13
Banaanbax balaadhan oo manta ka dhacay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa waxaa fariin cad loogu diray maamulka Somaliland taasi oo kusaabsan duulaanka gardarada ah ee kasocda Gobolka.
Wasiirka Wasaaradda Amniga Puntland Cabdisamad Gallan iyo Wasiiru-Dawlaha wasaaradda Deegaanka iyo Beeraha Cabdirashiid Gelle ayaa dadka Mudaharaadayey oo lahadlay ayaa ka hadlay Puntland inay dalka difaacayso iyo in kale mowqifkooda inay cadeeyaan goobta mudaharaadka oo wasiiradu soo gaadheen.
Waxaa kale oo Badhan Iyana Saaka Gaadhay Taliyaha Booliska Puntland Muxiyadiin iyo Saraakill kale.
wac waan kaa qaaday wallal salaanta qiimaha badan ee saldanada reer Sanaag ee sharafta iyo xigmada badan oo dadkeenu inta badan kusifoobeen maxaa jira waxaan kukornay guryo wanaagsan iyo decent families oo diin usaaxiib ah qof walbana waxaa calaamad uah hadlkiisa iyo qoraalkiisa adigoo aanba waligaa lakulmin ayaad kala sheegi kareeysaa Meesha uu kasoo baxay ama background kiisa iyo dhaqankiisa sidaas darted baanan inta badan kuba darsan markaan arko wax ISKU DHEXYAACSAN oo hadalka kiisa laga yaq yaqsoodo iyo kiisa laga faano aan kaxishoon.
Kurdish Miyaa Mise Waa Falastiin?
Dhagaxa Tuura Taayiradana GUBBA!!
Oday Muuse iyo dhamaan SNM oo blue colour arkaan is madax mara.kkk
Hadaad aragtaan QOSSOL gariir aan loo meel dayeeyn oo iska soconaaya bilaa sabab dabakhaad waa kaweeyn yahay ee ilaaliya waa intaasoo hunqaaco iyo wax kafakadaane kk
@Her Royal Highness, Princess Gabar Harti,
Boqoraddeenaay adiga ayaa mudan oo taajka Saldanadaha iyo Boqortooyada Daarood asal dhalad u ah. Geesinimada aad wax nagaga caaabbiso dhaxal sugan baad u yeelatay ina adeer.
Sidii aan bogag hore ku caddeeyay madasheenan Marqaan News naf yar oo Habar Awal ah baa magacyadan faraha badan isugu camira oo akhyaarta caaydooda ugu gabbada.
Ninka Isaaqa dhaladka ah ee mar mar hadallo xikmad leh nagu soo darsada waa Suldaan Adnan (Cadnaan) oo Habar Yoonis ah. Abidkii af xumo iyo qurun laga ma hayo waayo reer abtiyadooda Daarood bay la dhaqan, asluub iyo xadaarad yihiin runtii.
Qaddiyaddii SNM Garxajiska waa lagu qalday oo beenteedii na way ogaadeen. Laba reerood baa geyiga ka dhex qayl qayliya oo kuwa sakhraanka ah iyo Oromo darxumeysan daasadaha ku qarqaraacda. Sababta loo IGNORE gareynayo ayaa ah in aanay waxba u dhigmin oo reer waalanka ay waligood ba ahaayeen loo arko.
Suldaan Adnan si gaar ah baan u salaamayaa.
Maxamuud Saleebaan caqli badanaa markii Madaxtinimo loo tartamaayo waa safka hore markii uu dagaal dhaco waa safka dambe.
Cabdisimad Galan waa nin Cali Saleebaan ah maskiinyahoow dameer lagu shaqeysanaayo ha noqonin. Aaway dadkii maqaayadda Puntland u shidantahay? Dheriga dabka saaran agtiisa ka raadiya. Xaa ku caqli ah. KKKKKKKKK
Markaan dib u sii raacay hab hadalkaaga iyo Laajaddaada Samaalaha ad sheegatid kuma sin banaanid.Hase ahaatee ka soo qaad in ad tahay nin kabaqaya in uu sheegto waxuu u dhashay.Waligiis Fulay meelo kaluu ku soo gabadaa oo kaligiis isma keeno.
Calaa kulli xaal adiguba haddii ad puntlaan iska soo dhiibtid shaqaa lagu siinayaa ee diyaar ma tahay?
“xaa kuu caqli ah” kkkkkk xaaqato ku dishay!
Saaxiib wax badan baad ka dhoohan tahay ee bal aan miyirka kuu toosiyo.
1. Habar Gidirta aad ka dhalatay saddex maamul bay reero ahaan ugu kala qaybsameen oo ay xabbad iska la hor fadhiyaan. Kuwee baa dameero ka ah?
2. Isaaqii Garxajis iyo Jeegaan bay reero ahaan ugu kala jabeen oo ay qoryo iskugu shiishayaan. Kuwee baa dameero ka ah?
War tani Soomaali oo dhan bay ka dhex taagan tahay ee waxa adiga ta Hartiga goonida ku tusay ee aynu anagu dameero ku noqonnay ma inaga qancin kartaa maandhe? Mise waa halkiinii iyo odaygii habarta wax loo saaray?
Hoggaankii dhaqanka Beelaha Somaliyeed ee soo jireenka ahaa oo siyaasaddii ku milmay.?…..
Somalidu muddo dheer u lahayd dhaqan soo jireen ah. Oo nabaddooda, maamulka gudahooda iyo wada noolaashahooduba ku xidhnaa.
Oday, beel daajiye, malaaq, qotin, caaqil, duub, Islaan, Imaan, Suldaan, Ugaas, Garaad iwm, ayaa ah magacyada hoggaanka ama madaxda beelaha, Jufooyinka iyo qabiilka. Hoggaanka magacyadan sitana waxa aan ku soo dhaqmeyney muddo boqollaal sano ah, oo jiilba jiil isa soo dhaxlayey.(
asc trawiix wanaagsan inta muslimiinta ah
oo dr cawadoow qofka ‘samaale’ wata ma umadii baa? Allahu Akbar waa iska xaal aduun afka intuu qoyanyahay illen hadalba madaayokkkk
Adigu 5 GUS oo Isaaq ah kala dooro.nasiib badanidaa.
Ninka Magaca Copy wata fuleyga ah adeer horta soo Qaado magaca xalaasha ahaa(Wax xal ah oo lagu gaadho haba yaraatee ma jirto in qof la caayo ama la aflagaadeeyo oo aan ka ahayn in intaa badelkeedu adna cid kale kaaga timaado, wakhtina kaaga lumo aakhirona aad ku cadaab mudan karto.?….(raggu hiddo umma leh)
(caydu)habdhaqanka Qalloocan)(gurancan)digniin ixtiraam akhyaarta.
Waryaada Maxamuud Saleebaan in aad dhahdiin xukunka waxaan mar walba u qabanaa Puntland annaga difaacno oo dhiig u daadino. Marka hadda see ku dhacday in nin Warsangeli ah iyo nin Cali Saleeban frontiga u dirtiin idinkana “Dani’ uu Gaalkacyo marti qaad ku jiraa. Waxaas aa caqli ah.
No more isaaq administration after bixi and the old spy Faisal who is for more chance in Kenya and somalia